Sambava sy Anosibe an’Ala…: hatao, anio, ny CEPE manokana | NewsMada
Sambava sy Anosibe an’Ala…: hatao, anio, ny CEPE manokana
15 ireo Cisco hiatrika ny fanadinana CEPE “session speciale” anio. An’arivony ireo ankizy hiatrika izany any amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Sava.
Hotanterahina, anio tontolo andro, ny fanadinana CEPE ho an’ireo Cisco 15 tsy nahavita izany. Any Andapa, miisa 153 ireo mpiadina hiatrika izany, 164 kosa izy ireo ny ao Sambava. Efa vonona ny mpampianatra hanatanteraka ny fiambenana ireo mpianatra sy hitsara ny taratasim-panadinana. Efa voatsinjara any amin’ireo foibem-panadinana ihany koa ny laza adina hotanterahina amin’izany CEPE manokana izany amin’izao fotoana izao.
Any Alaotra kosa, 14 ny foibem-panadinana handray ireo mpianatra 1 424 hiatrika ity CEPE manokana ity. Mahatratra 66 ny efitranon-tsekoly hitsinjarana ireo mpiadina ireo. Mifarimbona amin’ny fampahombiazana ny fanadinana ireo mpampianatra avy amin’ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina. Efa voatsinjara koa ny laza adina. Hatry ny zoma teo ny fanaterana izany tany amin’ireo Cisco sasany. Misy saro-dalana ireo toerana hanatanterahana ny fanadinana ireo ary misy miampita rano mihitsy aza vao tonga any.
Tsiahivina fa vokatry ny tsy fahatongavan’ny laza adina no tsy nahafahan’ireo mpianatra tamin’ny Cisco 15 nanatanteraka ny fanadinana CEPE niarahana manerana ny Nosy ka izao nanaovana « session speciale » izao izy ireo.